မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲ လျှောက်ထားခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံး၍ အသစ်လျှောက်ထားခြင်း
သင်္ဘောသားအဆင့်မှ ကုန်းပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်လျှောက်ထားခြင်း
: ၁၀:၀၀~ ၁၂:၀၀ နာရီ ( လျှောက်လွှာတင်ခြင်း)
: ၁၃:၀၀~ ၁၅:၀၀ နာရီ ( နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ယူခြင်း)
10:00 Am to 12:00 noon (Drop-off)
1:00 Pm to 3:00 Pm (Pick-up)
NOTES TO MYANMAR PASSPORT HOLDERS
(1) IT TAKES 10 BUSINESS DAYS (MORE OR LESS2DAYS) TO ISSUE Myanmar Passport when the documents are complete.
(2) Please complete the requirements before sent out in order to avoid the delay of processing.
(3) Processing days start from the completion of required documents, not from the receiving of application.
(4) Returned Envelopes must be computer-generated, prepaid, self-addressed with clear postal codes. Any payment with Credit card is not accepted.
(5) Please don't refer our email address for the purpose of postal notification.
(6) For every consular matters regarding Myanmar passports, copy of valid PR Card or Study Permit or Work permit has to be submitted along with other documents.
- စက်ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်
- နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်လျှောက်ထားခြင်း
- မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲ လျှောက်ထားခြင်း
- သင်္ဘောသားအဆင့်မှ ကုန်းပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း
- မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံး၍ အသစ်လျှောက်ထားခြင်း
- ထောက်ခံစာများ ပြုလုပ်ခြင်း
- ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း ပုံစံ
- နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ / ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပုံစံ
ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်သူများမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း PDF
မှီခိုသူမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း PDF
ကျောင်းသားဖြစ်သူမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း PDF
သာသနာဝန်ထမ်းမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း PDF
နိုင်ငံခြားတွင်မွေးဖွားသည့် ကလေးများအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း
ကျောင်းသားဖြစ်သူ မှ ထောက်ခံစာပြုလုပ်ခြင်း PDF
ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပို့ပုံစံ - PDF
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းအဖွဲ့ (ICAO) ၏ စံသတ်မှတ် ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် စက်ဖြင့်ဖတ်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ Machine Readable Passport (MRP) အား သံတမန်ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်တာဝန်ဖြင့် ပြည်ပသို့ သွားရောက်ကြမည့်၀န်ထမ်းများ၊ ပြည်ပသို့ကိစ္စအဝ၀ (အလုပ်အကိုင်/ အလည်အပတ်/ ဘာသာ ရေး/စီးပွားရေး/ကျောင်းသား) ဖြင့် သွားရောက်ကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ်တစ်အုပ်လျှင် ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ 25 ကျ သင့်ပြီး၊ ထုတ်ပေးသည့်နေ့ရက်မှစ၍ သက်တမ်း (၅) နှစ်ရှိပါမည်။
စာအုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလျှင် စာအုပ်ဟောင်းတွင် သက်တမ်းတိုးခြင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ဘဲ၊ စာအုပ်အသစ် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါက မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ဒါဏ်ကြေး ကနေဒီယန် ဒေါ်လာ 75 နှင့် စာအုပ်အသစ် အတွက် ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ 25၊ စုစုပေါင်း ကနေဒီယန် ဒေါ်လာ 100 ပေးဆောင် ၍ အသစ်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျသင့်ငွေကို Bank Draft/Money Order/Cash ဖြင့် ပေးချေရ မည်ဖြစ်ပြီး။ Payable to “Myanmar Embassy” ဟု ရေးသားဖော်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မွေးကင်းစကလေးများအားလည်း အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း (၅)နှစ် သက်တမ်းရှိ MRP များ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ (မွေးစာရင်း မိတ္တူ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်)
အမည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမည်ဖြည့်စွက်ခြင်းစသည့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်များ၊ မွေးကင်းစ ကလေးများ New Born Baby များအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသူများအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ထုတ်ခြင်း နှင့် တစ်ကြိမ် တစ်ခါသုံး မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့ရုံး နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများသို့ တင်ပြ၍ သဘောတူခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
(၁) (၆)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ရောင်စုံဓာတ်ပုံ (Resolution 600 DPI) ဖြစ်ရမည်။
(၂) မျက်နှာဧရိယာသည် ဓာတ်ပုံ၏ ၈၀ % ရှိရမည်။
(၄) ဓာတ်ပုံပေါ်ရှိ မျက်နှာ၏ အရောင်သည် နဂိုမူလ အသားရောင် ဖြစ်ရမည်။
(၅) ထင်ရှားပြတ်သားမှုရှိသော ပုံရိပ်ဖြစ်ရမည်။
(၆) မျက်လုံးအနေအထား မျက်လုံးနှစ်ဘက်မှာ တစ်တန်းတည်းဖြစ်ရမည်
(၇) မျက်နှာပေါ်၌ ဆံပင်များ ဖုံးအုပ်ခြင်း မရှိစေရ။
(၈) မျက်နှာသည် နောက်ခံအဖြူရောင်၏ အလည်တည့်တည့် ဖြစ်ရမည်။
(၉) မျက်လုံးပေါ်တွင် အနီစက်/အဖြူစက်အလင်းပြန်ခြင်းမရှိစေရ။
(၁၀) မျက်နှာအနေအထားသည် တည်ကြည်သော အနေအထားဖြစ်ရမည်။
(၁၁) နှုတ်ခမ်းအနေအထားသည် ဖွင့်ဟသော အနေအထား မဖြစ်စေရ။
(၁၂) ဓာတ်ပုံပေါ်တွင် အလင်းပြန်ခြင်း မရှိစေရ။
(၁၃) ဓာတ်ပုံပေါ်တွင် အရိပ်မထင်စေရ။
(၁၄) မျက်မှန်တပ်သည့်သူများ အရောင်းပြောင်းမျက်မှန် (tinted lenses) မျက်မှန်ပေါ်တွင် အလင်းမပြန်စေရ၊ မျက်မှန်ဘောင်များ (frames) သည် မျက်လုံးကိုမကွယ်စေရ။
(၁၅) ဦးထုပ်ဆောင်း၍ မရိုက်ရ။
(၁၆) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဝတ်ပုဝါသည် မျက်နှာပေါ်တွင် အုပ်မိုးခြင်း/ အရိပ်ကျခြင်းမရှိစေရ။
(၁၇) ဓာတ်ပုံအရွယ်အစားမှာ ( ၅ စင်တီမီတာ - ၇ စင်တီမီတာ) ရှိရမည်။
(၁) လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (မူရင်း)
(၂) ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကဒ် (Work Permit) (သို့မဟုတ်) ပညာသင်ကြားခွင့်ကဒ် (Study Permit) (မိတ္တူ)
(၃) ဝင်ငွေခွန် Updateထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာမိတ္တူ
(စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ ၄ ပုံံ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ရေးသွင်းရမည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ လက်ဗွေပုံစံ၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ)
(၅) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက်ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅( Twenty Five only) (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(Prepaid self-addressed return envelop/courier way bill)
(၇) အခြားတင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ဖော်ပြရန်
(၃) မှီခိုခံ၏ ြမန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ/ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်က ID ကဒ်မိတ္တူ
(၄) မှီခိုခံ၏ ဝင်ငွေခွန် Update ထမ်းဆောင်ထားကြောင်း ပြေစာမိတ္တူ
(၅) မှီခိုခံမှာ နိုင်ငံခြားသားခင်ပွန်းဖြစ်ပါက လက်ထက်စာချုပ် (မိတ္တူ) နှင့် အပြန်လေယာဥ်စရိတ် ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀(One Thousand only) ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ
(၆) မှီခိုခံမှ အစစအရာရာ တာဝန်ယူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကိုယ်တိုင်ရေးစာ
(၇) ပူးတွဲပါ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ယူရာတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ ၄ ပုံ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ရေးသွင်းရမည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ လက်ဗွေပုံစံ၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ)
(၈) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက်ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅ (Twenty Five only) (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(၉) ကျသင့်တန်ဖိုးငွေ ပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်
(၁၀) အခြားဖော်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန်
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျောင်း၏ ကျောင်းတက်ရောက်နေကြောင်းထောက်ခံစာ
(၄) သက်တမ်းရှိ ကျောင်းသားကဒ် မိတ္တူ
(၅) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ယူရာတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ ၄ ပုံ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ရေးသွင်းရမည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ လက်ဗွေပုံစံ၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ)
(၆) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက်ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅ ( Twenty Five only) (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(၇) ကျသင့်တန်ဖိုး ငွေပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်
(၈ အခြားဖော်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန်
(၁) လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ
(၃) သက်ဆိုင်ရာကျောင်း၏ ကျောင်းတက်ရောက်နေကြောင်း ထောက်ခံစာ
(၄) သက်တမ်းရှိ ကျောင်းသားကဒ်မိတ္တူ
(၅) ထောက်ခံစာအတွက် ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၅၀
(Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(၆) ကျသင့်တန်ဖိုးငွေ ပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်
(၇) ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ဖြည့်စွက်ချက် (ပထမဆုံးအကြိမ် လျှောက်ထားသူများအတွက်)
(၈) အခြားဖော်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန်
(၅) မှီခိုသူထောက်ခံစာ လျှောက်ထားခြင်း
မှတ်ချက်- မှီခိုထောက်ခံစာ လျှောက်ထားသူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(၃) မှီခိုခံ၏ ြမန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ / နိုင်ငံခြားသားဖြစ်က ID ကဒ်မိတ္တူ
(၆) ထောက်ခံစာအတွက် ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၅၀
(၇) ကျသင့်တန်ဖိုးငွေ ပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်
(၈) ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြည့်စွက်ချက် (ပထမဆုံးအကြိမ်လျှောက်ထားသူူများအတွက်)
(၉) အခြားဖော်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန်
(၆) ခေတ္တ အလည်လာသူမှ အလုပ်လုပ်သူ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် လျှောက်ထားခြင်း
မှတ်ချက်- ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(၁) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ (မြန်မာ/ကနေဒါနိုင်ငံအဝင်/အထွက် စာမျက်နှာများအပါအဝင်)
(၃) ကိုယ်ရေးရာဇဝင် + ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
(၄) ကျသင့်တန်ဖိုးငွေ ပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်
(၅) အခြား တင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်
ခေတ္တအလည်လာသူမှ အလုပ်လုပ်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက်
(၆) အလုပ်မှ ထောက်ခံစာ
(၇) ဝင်ငွေခွန် စတင်ထမ်းဆောင်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ
(၈) ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ငွေ (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
ခေတ္တအလည်လာသူမှ ကျောင်းသားအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက်
(၆) သက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ ထောက်ခံစာ + ကျောင်းသားကဒ်မိတ္တူ
(၇) ကျသင့်ငွေ (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(၈) ကျသင့်တန်ဖိုးငွေ ပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်
(၇) ကျောင်းသားဖြစ်သူမှ အလုပ်လုပ်သူ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် လျှောက်ထားခြင်း-
ကျောင်းသားမှ အလုပ်လုပ်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက်
(၄) အလုပ်မှ ထောက်ခံစာ
(၅) ဝင်ငွေခွန် စတင်ထမ်းဆောင်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ရမည့် ပုံစံ
(၆) ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ငွေ (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(၈) အခြားတင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ဖော်ပြရန်
(၈) မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံး၍ အသစ်လျှောက်ထားခြင်း
မှတ်ချက် - ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(၁) လျှောက်ထားသူ၏ ပျောက်ဆုံးသွားသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ
(၃) ဝင်ငွေခွန် Updateထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာမိတ္တူ (ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်သူဖြစ်ပါက)
(၄) ကျောင်းသားကဒ်မိတ္တူ (ကျောင်းသားဖြစ်ပါက)
(၅) မှီခိုခံ၏ ဝင်ငွေခွန် Update ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာမိတ္တူ (မှီခိုသူဖြစ်ပါက)
(၆) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ယူရာတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(၇) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက် ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅ နှင့် ပျောက်ဆုံး ဒါဏ်ကြေး ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၇၅ ( One Hundred only)
(၉) အခြား တင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်
(၁၀) ရဲစခန်း အကြောင်းကြားစာ (Police Report)
(၉) နိုင်ငံခြားတွင် မွေးဖွားသည့် ကလေးငယ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း
(၁) မိခင် နှင့် ဖခင်တို့၏ ြမန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူများ
(၂) မိခင် နှင့် ဖခင်၏ ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကဒ် (Work Permit) (သို့မဟုတ်) ပညာသင်ကြားခွင့်ကဒ် (Study Permit) (မိတ္တူ)
(၃) မိခင် (သို့မဟုတ်) ဖခင်၏ ဝင်ငွေခွန် Updateထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာမိတ္တူ
(၄) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ယူရာတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(၅) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက် ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ၂၅ ( Twenty Five)
(၆) ကျသင့်တန်ဖိုး ငွေပေးချေပြီးသည့် အပြန်စာအိတ်
(၇) အခြား တင်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်
(၁၀) သင်္ဘောသားအဆင့်မှ ကုန်းပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်‌ြေပာင်းလဲ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း
(၁) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း + CDC မူရင်း
(၂) ကနေဒါနိုင်ငံအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကဒ် (Work Permit) (သို့မဟုတ်) ပညာသင်ကြားခွင့်ကဒ် (Study Permit) (မိတ္တူ) (ရြပီးဖြစ်လျှင်)
(၅) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက် ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅( Twenty Five only) (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(၈) လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်ခန့်စာ
(၁၁) သာသနာ့ဝန်ထမ်းမှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း
(၁) လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (မူရင်း)
(၂) ကနေဒါနိုင်ငံ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (PR Card) (မိတ္တူ)
(၃) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ယူရာတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ
(၄) သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သာသနာဝန်ထမ်း ကဒ်ြပားမိတ္တူ
(၅) လက်ရှိသီတင်းသုံးသည့်ကျောင်း/ရိပ်သာ၏ ထောက်ခံချက်
(၆) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်အတွက် ကျသင့်ငွေ ကနေဒီယန်ဒေါ်လာ ၂၅ ( Twenty Five only) (Money Order/Bank draft- Payable to Myanmar Embassy)
(၈) အခြား ဖော်ပြရန်ရှိက သီးခြားစာရွက်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန်
Gratis Official Visa
Embassy WebsitesBANGKOKBEIJINGBERLINBRASILIABRUSSELSCANBERRAHANOIISLAMABADISLAMABADLONDONMOSCOWNEW DELHIOTTAWAPHNOM PENHPRETORIARIYADHROMESEOULSINGAPORETELAVIVTOKYOWASHINGTON.D.CGENEVAJAKARTAHONG KONGKUNMINGVIENTIANEBANDAR SERI BAGAWANCAIRONANNINGNEW YORKBELGRADEOTTAWAKUWAIT
Myanmar Unicode Font
Download Myanmar Unicode font
Ministry WebsitesMyanmar ConstitutionalPresident office (Myanmar)Ministry of informationPyithu HluttawMinistry of Trade & e-commYangon City Development CommitteeMinistry of Industry 1Ministry of Industry 2The Ministry Of Religious AffairsMinistry of Foreign AffairsMinistry of CommerceMinistry of Livestock-FisheriesMinistry of ConstructionMinistry of Agriculature and IrrigationMinistry of Co-OperativesMinistry of Hotels and TourismMinistry of Home AffairsMinistry of Educationministry of HealthMyanma Posts and Telecommunications(MPT)Ministry of TransportMinistry of Social welfare, Relief & Resettlement (Department of Social Welfare)Ministry of Science and TechnologyMinistry of LabourMinistry of EnergyMinistry of Forest & EnvironMon GovernmentMinistry of Rail TransportationUnion Civil Service BoardMinistry of National Planning and Economic Development
Address: 336, ISLAND PARK DRIVE, OTTAWA,ONTARIO K1Y0A7, CANADA
Tel: (1)(613)232 9990
YOU ARE HERE: Home Consular Matters
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar © Copyright 2013 by EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, OTTAWA (CANADA).